नेप्सेमा झिनो वृद्धिः बजार पूँजीकरण ३६ खर्ब ७२ अर्ब, कुनकाे कति काराेवार ? - Jillakhabar.com
नेप्सेमा झिनो वृद्धिः बजार पूँजीकरण ३६ खर्ब ७२ अर्ब, कुनकाे कति काराेवार ?
काठमाडौँ, २३ चैत २०७७
आइतबार उच्च अङ्कले बढेर नयाँ रेकर्ड बनाएको धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज भने झिनो अङ्कले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १.१३ बिन्दुले बढेर दुई हजार ६५८.७४ बिन्दुमा पुगेको छ ।
Previous articleफेरि बढ्याे वायुप्रदूषण: जरूरी काम बाहेक बाहिर ननिस्कन विज्ञको सुझाव